Inhloko ZeNdaba Mfumfu 08, 2021
Mfumfu 08, 2021
Ngokutshona kosuku lwayizolo, inani labahlolwe batholakala bele COVID-19, eZimbabwe, lokhu lolubhubhane lwaqhamukayo nyakenye, selikunkulungwane ezedlula ezilikhulu-131,523 okugoqela abantu asebegule basila kulumkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu-124,685 kwafa inkulungwane ezedlula ezine lengxenye- 4,631.
Kunje ele Zimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu-3,152,916, ijekiseni yokuzivikela kuCovid 19, kodwa abangaba yizigidi ezedlula kancane ezimbili babo- 2,374,045 yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili.
Ngesikhathi uhulumende eqinisa elokuthi kumele izisebenzi zakhe zonke zihlatshwe ijekiseni lokuzivikela kuCovid 19, inhlanganiso emela ababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe - ARTUZ, ise incwadi yezikhalazo phezu kwaloludaba kanye lokutshengisela ukukhonona kwayo.
Uzulu koBulawayo uthi imizamo yebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, eyokuthi bathenge idola leMelika ngesilinganiso samadola eZimbabwe esifakwe libhanga leli, yenza benelise ukuthola imali yakwamanye amazwe kodwa bathi kunzima ukuthi bayifinyelele njalo sebehlala besendwendweni osekubafaka engozini yokubanjwa inkunzi kanye lokuthola umkhuhlane weCOVID-19.
Ibandla leMDC-T elikhokhelwa nguMnu. Douglas Mwonzora lithi likhalela ukuthi kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe hatshi ukuba kungenziwa ukhetho ngomnyaka ka2023.
Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomhlabeleli weDalom Music ocula ekoBulawayo, uNgungunyane, ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi ‘Sinikiwe.’
Ku Livetalk namhlanje kuhlelo sikhangela isimo sokumelana leCovid 19 eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kuleli gcikwane.